‘हिम्मत हारेनौँ, बचाउन सफल भयौँ’ « Loktantrapost
[ आज मधेस प्रदेशमा बिदा ]
[ अफगानानिस्तानमा भूकम्पः कम्तिमा २६ को मृत्यु, दर्जनौं घाईते ]
[ प्रदेश २ को नाम मधेश, राजधानी जनकपुर ]
[ अभावले संघर्ष गर्न सिकायो ]
[ वडाध्यक्ष, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसहित १२ जनामा कोरोना ]
[ ‘द भ्वाइस किड्स’को उपाधि झापाका जेनिशलाई ]
[ ध्रुवे हात्तीको आक्रमणबाट सैनिकको मृत्यु ]
[ एमाले झापा चुनाव : समर्पण, उमेश र भुपाल बिजयी ]
[ एमाले झापा चुनाव : आदिबासी जनजाति खुल्लाबाट ६ जना बिजयी ]
[ एमाले झापा चुनाव : यी हुन् बिजयी भएका ३० जना (मत संख्यासहित) ]
[ एमाले चुनाव : मेचीनगर भूगोलतर्फ प्रसाई र राई बिजयी ]
[ क्यान्सर पीडित नबिनलाई बचाउन सहयोगको अपिल ]
‘हिम्मत हारेनौँ, बचाउन सफल भयौँ’
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०४:५०
मेचीनगर । माघ १ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका मेचीनगर–४ का रेशबहादुर तामाङ डेढ महिना लामो उपचारपछि सकुशल घर फर्किएका छन् ।
थोप्लेविरान सामुदायिक वनमा हरिणसँग ठोक्किएर गम्भीर घाइते भएका उनलाई चिन्ताजनक अवस्थामा वीएण्डसी अस्पताल विर्तामोडमा उपचारार्थ भर्ना गरिएको थियो । २० दिनसम्म आइसियुमा राखेर अचेत अवस्थामा उपचार गराइएका उनलाई सोमबार डिस्चार्ज गरी मेचीनगर–४ मागुरमाडीस्थित घर ल्याइएको छ ।
लामो अवस्थासम्मा वेहोश रहेका र स्वास्थ्य अवस्था अति गम्भीर भएका उनको उपचारलाई रेशुका शुभचिन्तकहरूले आश्चर्यपूर्ण सफलताको रुपमा लिएका छन् ।
दुर्घटनामा परेर एउटा अस्पतालमा भर्ना भएको भोलिपल्टै रेशुको पत्नीले अर्को अस्पतालमा पहिलो सन्तानको जन्म दिएका कारण यो खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा संयोगपूर्ण चर्चाको विषय बनेको थियो ।
रेशु घर फर्किने खबर पाएका मागुरमाडीबासी सोमवार बिहानैदेखि उनको घरमा भीड लागेका थिए । ‘भगवानले हाम्रो रेशुलाई बचाइदिए’, सामाजिक अगुवा बालकृष्ण थपलियाले सकुशल घर फर्किएपछिको पहिलो भेटमा रेशुलाई भने–‘भगवान हुँदैनन् भन्थे तर, वीएण्डसी अस्पतालमा भगवानकै वास रहेछ ।’
रेशुका आफन्त, छरछिमेकी र शुभचिन्तकहरूले उनको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरू चन्द्रप्रकाश लिम्बू, रोविन भट्टराई र सिङ्गो वीएण्डसी अस्पताललाई ‘भगवान’कै संज्ञा दिएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर ४ का सचिव समेत रहेका रेशुको आगमनलाई गाउँलेले पुनर्जन्म नै ठानेका छन् । उनको आगमनले गाउँ नै उज्यालो भएको मागुरमाडीवासी बताउँछन् ।
सानै उमेरमा गाउँमा सामाजिक पहिचान बनाउन सफल रेशु अकल्पनीय दुर्घटनामा परी घाइते हुँदा सिङ्गो मागुरमाडी स्तब्ध भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नं. १ ले उपचार सहयोग समिति नै बनाएर ‘रेशु बचाउ अभियान’ सञ्चालन गरेको थियो ।
रेशु ४ वर्षदेखि पशु प्राविधिकको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उनको उपचारका लागि स्वस्फुर्त विद्यार्थी, सामाजिक सङ्घ सस्था, राजनीतिक दल, शुभचिन्तक, व्यवसायी, शुभचिन्तकले देश तथा विदेशबाट रकम जुटाएका थिए । सबैको माया र सद्भाव पाएर उनले नयाँ जीवन पाएका छन् ।
उनको उपचारमा अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरू ज्यादै मिहेनत गरेको रेशुको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् । जटिल अवस्थामा उपचारार्थ भर्ना गरिएका उनको सफल उपचारमा अस्पताल परिवार समेत प्रसन्न छ ।
‘एउटा नयाँ जीवन दिएका छौँ’, वीएण्डसी अस्पतालका कार्यकारी निर्र्देशक दुर्गा प्रसाईले भने– ‘उपचारमा कुनै सानो पनि कमजोरी भएको थियो भने रेशुको बाँच्ने आशा हुँदैनथ्यो ।’
सुरुको अवस्थामा उनको स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजुक रहेको र युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले फोन मार्फत घाइतेलाई ल्याइँदै गरेको जानकारी दिएपछि अस्पतालले उपचारको सबै बन्दोबस्त मिलाएको निर्देशक प्रसाइँले बताए ।
‘सम्बन्धित डाक्टरहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेर तुरुन्तै ल्याउनसाथ पहिलो अप्रेशन गरायाँै । केही दिनसम्म त हामीलाई पनि विश्वास नै लागेको थिएन बचाउन सकिन्छ भनेर’, प्रसाई भन्छन्–‘तर, हामी निरन्तर लागिरह्यौ, हिम्मत हारेनौँ र बचाउन सफल भएका छौँ ।’
उनी दुर्घटना भएको १ दिनपछि उनकी पत्नी मीनाले दमकको आम्दा अस्पतालमा छोरा देशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । मीनाले अस्पतालकै वेडबाट आफ्नो पतिलाई बचाइदिनका लागि सबैलाई आग्रह गर्दै सहयोगको अपिल समेत गरेकी थिइन् । बुबा धनबहादुर आमा जुद्धमाया तामाङ पनि छोरा रेशुले नयाँ जीवन पाएकोमा डाक्टर तथा सम्पूर्ण सहयोग गर्नेप्रति आभारी छन् । मङ्गलबार लोकतन्त्रकर्मी पुग्दा धनबहादुर छोरा रेशुलाई औषधी खुवाउँदै थिए । धनबहादुरका आँखामा खुसीका आँसु स्पष्ट देखिन्थे ।
उनको उपचारमा डाक्टर चन्द्रप्रकाश लिम्बू, डा. रोविन भट्टराई, डा. उमेशकुमार शर्मा, डा. राजु श्रेष्ठलगायत ११ जनको टिम सहभागी भएको अस्पताल स्रोतको भनाई छ । उनीहरूको अथक मेहनतको प्रतिफलमा उनले नयाँ जीवन पाएको रेशु बचाउ अभियानका संयोजक मणिकुमार उप्रेतीले बताए ।
‘हरेक सेकेण्ड महत्वपूर्ण थियो’, उपचारमा संलग्न डाक्टर उमेशकुमार शर्माले उपचारको अवस्था सम्झदै भने–‘उनको भाग्य, भगवानको भरोसा र सबैको चाहनामा आज उनलाई बचाउन सफल भएका छौँ ।’ डा. शर्मा सुरुको अवस्थालाई ‘अत्यन्तै व्रिmटिकल’ भन्न रुचाउाछन् ।
डा. शर्माका अनुसार दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरणका कारण पनि उनको उपचार सम्भव भएको हो । डाक्टर शर्माका अनुसार टाउकामा गम्भीर आघात परेका कारण रेशुले पूर्ण रुपमा होशका कुरा गर्न अझै समय लाग्छ । किनकि उनको टाउकाको हड्डी हाल पेटमा राखिएको छ । अढाई महिनापछि उक्त हड्डी टाउकोको पुरानै ठाउँमा राखेपछि उनी पूर्ण रुपमा ठिक भएको मानिने छ ।
रेशुको अप्रेशनमा प्रयोग गरिएको मेसिन नेपालमै पहिलो पटक यो अस्पतालमा प्रयोग गरिएको चिकित्सकको दावी छ । यो मेसिन १२ करोड र भेन्टीलेटर मेसिन १ करोड १२ लाखमा खरिद गरिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
रेशुको उपचारमा १५ लाख खर्च भएको छ । अस्पताललाई अझै ३ लाख ४५ हजार तिर्न बाँकी रहेको दाजु भुपेन्द्र तामाङले बताए । उनका अनुसार उनलाई अढाइ महिनापछि फेरि उपचारका लागि अस्पताल लानु पर्नेछ । त्यसमा पनि १ लाख ५० हजार भन्दा बढी खर्च लाग्ने छ । अहिलेसम्म तिरेको केही रकममा ऋण पनि छ ।
अभियानमार्फत उठ्ने व्रmम पनि छ । तर, अझै अपुग हुने भएकोले सहयोग गरिदिन तामाङ परिवारले आग्रह गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसहित १२ जनामा कोरोना
मेचीनगर, २ माघ । मेचीनगरमा आज २८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
एमाले झापा चुनाव : समर्पण, उमेश र भुपाल बिजयी
विर्तामोड, २ माघ । नेकपा एमाले झापाको युवा, विद्यार्थी तथा खेलकुद तर्फको खुल्ला २ जना जिल्ला सदस्यका लागि